Hunhu, Yakasarudzika Mota GPS Navigation, Kamera kamera, LED purojekita Yakagadzirwa muChina, Vagadziri - Dongguan Yingjia Electronic Technology Co, Ltd
Yingjia Electronics inyanzvi nekuti yakakomba. Nekuti inyanzvi, zvakakodzera sarudzo yako!
9 padiki Android kufamba
Ine Android hombe-screen mota yekufambisa system, hauzombotya kurasikirwa. Mota Android yekufambisa redhiyo vhidhiyo multimedia player 7-inch inobata skrini ine Bluetooth WiFi GPS yekufambisa system (Android 10, 2GB Ram 16GB ROM) inomiririra yakavakirwa pane Android 10, yakavakirwa-mukati quad-core CPU, 2GB Ram, 16GB Rom, Wifi, Bluetooth uye maGPS mamodule, Kutsigira kudzora vhiri, kumashure kuona kamera kuisa uye FM / AM radio Iyo yakagadzirirwa Bluetooth, WIFI. Inogona kushandiswa nekutungamira vhiri kudzora, yekumashure kamera yekuisa, uye inotsigira iko kurodha pasi, nekudaro ichiwedzera ruzivo rwekushandisa. Kugadziridzwa kwayo kwehardware kwakakwanira kusangana nezvido zvezuva nezuva zvekuvaraidza kutyaira uye iyo modhi ine yakatarisika zvakakwana dhizaini dhizaini.
10 inch Android system yekufambisa
Naiye achitungamira nzira, usazomborasika. 10.1-inch Android redhiyo mota redhiyo ine GPS kufamba. Iyo inobata skrini multimedia player inotsigira WiFi / girazi link / USB + backup kamera, ichiita kuti kutyaira kwako kuve kwakachengeteka
4.3 inch HD kamera
Yakareruka kuisa, inodhura izere HD 1080P mota Dvr kamera, 4.3-inch yakakwira-tsananguro mota yekutyaira rekodhi mbiri-lens mota kamera, DVR 4.3-inch yakakwira-tsananguro yehusiku chiratidzo mota yekutyaira rekodhi ine maviri masitayera erima negoridhe furemu yako sarudzo. Dhizaini yakagadzirirwa vanhu, zvese zvese ndezvekuchengetedza kwako chete. * Saizi yeLCD saizi: 4.3 inches 16: 9â
5.18 inch HD kutyaira rekodhi
Yakakwirira-yekupedzisira uye yemuchadenga HD DVR yekutyaira rekodhi ine simbi goko, 5.18-inch yekuona kumashure girazi HD mota kamera, ye-Ultra-yakatetepa yekubata skrini HD 1080P yekutyaira rekodhi ine kumberi uye kumashure maviri malenzi uye isina mvura yekumashure kamera. (Hombodo yeplastiki inosarudzika) Mhando mbiri dzezvinhu zvaunosarudza.
7 inch HD mbiri kamera yekutyaira rekodhi
Rega iwe uve neepamusoro-tsananguro yehusiku chiratidzo chekutyaira rekodhi yakagadzirwa neinc alloy. 7-inch inobata skrini yepamusoro-tsananguro mota kamera 7-inch rori rekodhi, mota DVR kumberi uye kumashure maviri makamera, husiku chiratidzo mota rekodhi, inodikanwa yepamusoro-tsananguro mota kamera yekudzosera kumashure, nyore kuisa uye nyore kushandisa, inodhura 7- inch inotsikisa-yepamusoro mota rekodhi, zvese ndezvekuchengetedza kwako Nekuda kwako.
10 padiki HD husiku chiratidzo chichifambisa midhiya kutyaira rekodhi
Iyo yakavimbika YJ yepamusoro-tsananguro yehusiku chiratidzo chekutyaira rekodhi, inokuperekedza ine yakakwira-tsananguro 2K mifananidzo uye zvakapfuma mabasa. Husiku chiratidzo chekutyaira rekodhi, kunyangwe iwe uchinyora yakakwira-tsananguro mifananidzo husiku kana masikati, zvese ndezvekungochengetedza kwako chete kutyaira.